အပျိုနဲ့ အိမ်ထောင်သည် ဘယ်သူပိုလှမလဲလို့ မေးလိုက်ရင် အများစုက အပျိုလို့ပဲ ပြောကြမှာပါ ။
တကယ်လဲ အလှပြင်ချိန် ကိုယ့်ကိုကိုယ် ဂရုစိုက်ချိန်တွေက အပျိုတွေက အိမ်ထောင်သည်တွေထက်ပိုရကြပါတယ် ။
အိမ်ထောင်သည်တွေမှာက ဘယ်လောက်ချမ်းသာပြည့်စုံနေပါစေ မတူညီတဲ့ အသိုင်းအ၀ိုင်းနှစ်ခုကိုပေါင်းစပ်ထားတာမို့ အိမ်ထောင်မှုတာဝန်တွေက ပိုများပြားလာတာတော့အမှန်ပါပဲ ။ ဒီကြားထဲက ခြွင်းချက်အနေနဲ့ အိမ်ထောင်ကျပြီးမှ ပိုလှလာတဲ့ သူတွေ လဲရှိပါတယ် ။
ကိုရီးယားမင်းသမီးတွေထဲက သူတို့တွေကတော့ အိမ်ထောင်ကျပြီးမှ ပိုလှလာတယ်လို့ ပြောခံကြရတဲ့သူတွေပါ ။ တကယ်ပဲ လှလာလား ဆိုတာတော့ သူငယ်ချင်းတို့ပဲကြည့်လိုက်ကြတော့နော် ...
1. CHA YE RYUN
မြန်မာနိုင်ငံက Drama ပရိတ်သတ်တွေ ရင်းနှီးနေပြီးသားမင်းသမီးတစ်လက်ပါ ။ သူမလေးဟာ မင်းသား Joo Sang-wook နဲ့လက်ထပ်ခဲ့ပြီး လက်ထပ်ပြီးနောက်ပိုင်းမှ ပိုမိုရင့်ကျက်တဲ့ အလှတရားတွေနဲ့ ပိုလှလာတယ်လို့ ပရိတ်သတ်တွေ ကအသိအမှတ်ပြုခြင်းကို ခံရပါတယ် ။
ကိုရီးယားအနုပညာလောကရဲ့ ထင်ရှားတဲ့ မ နဲ့ မောင်ရဲ့ အချစ်ဇာတ်လမ်းမှာ ခင်ပွန်းရဲ့ သည်းသည်းလှုပ်ချစ်တာ ခံရတဲ့ မင်းသမီးတစ်လက်အဖြစ်နာမည်ကြီးပါတယ် ။ သူမရဲ့ ခင်ပွန်းဟာ တက်သစ်စ သရုပ်ဆောင်ဘ၀မှာ သူမနဲ့ ရုပ်ရှင်တွဲရိုက်ခဲ့ပြီး ချစ်ကျွမ်းဝင်ကာ လက်ထပ်ခဲ့ကြတာပါ ။ အဲဒီအချိန်မှာ သူမက နာမည်ကြီးသရုပ်ဆောင်တစ်ယောက်ဖြစ်နှင့်နေပါပြီ ။ သူမထက် ငယ်တဲ့ခင်ပွန်းနဲ့လက်ထပ်ထားပေမယ့် ခင်ပွန်းက အလွန်ကို ဂရုစိုက်ချစ်ခင်တာကိုတွေ့မြင်ကြရပါတယ် ။ အိမ်ထောင်ကျပြီးမှ ပိုစိတ်ချမ်းလာသလားမသိ ။ ပိုချောနေရောပဲ ။
ရေသူမမင်းသမီးလေးကတော့ ကိုရီးယားနိုင်ငံရဲ့ အချမ်းသာဆုံးစာရင်းဝင် လုပ်ငန်းရှင်သူဠေးနဲ့ လက်ထပ်ထားတာပါ ။ သူမရဲ့ ခင်ပွန်းကလည်း မင်းသားတစ်ယောက်လိုကို ချောမောတဲ့ရုပ်ရည်ရှိပါတယ် ။ မင်းသမီးလေးက အိမ်ထောင်ကျပြီးရုံတင်မကဘဲ ရင်သွေးလေး ၂ ယောက်ပါရထားတာတောင် အပျိုရှုံးအောင်လှပနေဆဲပါပဲ ။
ဒီမင်းသမီးလေးကလည်း မင်းသား Ji Sung နဲ့ ရုပ်ရှင်ရိုက်ရင်းဖူးစာဆုံခဲ့တာပါ ။ သူမလဲ အိမ်ထောင်ကျပြီးမှ ပိုပြီး လှပလာတယ်လို့ ပရိတ်သတ်တွေကဆိုကြပါတယ် ။
သူကတော့ သဘာဝမင်းသမီးလေးလို့ နာမည်ကြီးပါတယ် ။ အသားအရေကောင်းခြင်း ရုပ်ရည်သွင်ပြင် ကိုယ်ခန္တာအချိုးအစား ပြောစရာမရှိအောင်ပြည့်စုံလွန်းသူပါ ။
ခင်ပွန်းသည် Rain နဲ့ အလွန်လိုက်ဖက်ပါတယ် ။ သူမလေးကလည်း အိမ်ထောင်ကျပြီးမှ အလှတွေပိုတိုးလာတဲ့ မင်းသမီးစာရင်းထဲပါပါတယ်တဲ့ ။
မကြာသေးခင်ကမှ ကိုရီးယားတင်မက ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းက DOTS ဇာတ်ကားရဲ့ Fan တွေ လှုပ်လှုပ်ရှားရှားဖြစ်သွားလောက်အောင် မင်းသားချော Song Joong-ki နဲ့ လက်ထပ်ပွဲဆင်နွဲခဲ့တဲ့ မင်းသမီးလေးပေါ့ ။ သူမလေးကလဲ အိမ်ထောင်ကျပြီး ပိုလှလာတယ်လို့ ပရိတ်သတ်တွေ ခံစားရပါတယ်တဲ့ ။
သူတို့ကို ကြည့်ရင် တူညီတာတစ်ခုက သာယာချောမွေ့တဲ့ အိမ်ထောင်ရေးဘ၀လေးပါ ။ ခင်ပွန်းသည်တွေရဲ့ မြတ်မြတ်နိုးနိုး ချစ်ခင်ဂရုစိုက်ခြင်းကို ခံရတဲ့ အိမ်ထောင်ရှင်မိန်းမသားတွေမို့ စိတ်ချမ်းသာနေသလားမသိ ... ရုပ်ရည်ကိုပါ စိတ်ချမ်းသာမှုက သွားဟပ်ပြီး အလှတွေ တိုးလာကြတော့တာပါပဲ ။ အိမ်ထောင်ကျမှ ပိုလှလာတဲ့ ချစ်ဇနီးကိုပိုင်ဆိုင်ထားရပြီဆိုရင်တော့ အဲဒီခင်ပွန်းသည်ဖြစ်သူကို ဇနီးကို စိတ်ချမ်းသာအောင်ထားနိုင်သူအဖြစ် ချီးကျူးရမှာပဲဖြစ်ပါတယ် ။ ဘယ်သူတွေကို ချီးကျူးရတဲ့ ခင်ပွန်းသည်ဖြစ်စေချင်လဲ ? mention ခေါ်သွားလို့ရတယ်နော် ...